Qindaa'inoota durtii kan rukkina tokkoon tokkoo qubeelee jidduu qindeessa.
Barruu Western fi sirna barreeffama Asian
Qindaa'inoota durtii kan iddoo qubee barruulee Asian,maadheelee, fi waantota fakkisaa keessaa qindeessa.
Cafaqoon hin jiru
Sirna barreeffamaa qofa cafaqi
Sirna barreeffamaa fi Japanese Kana cafaqi
Qubeelee jalqabaa fi dhumaa
Qindaa'inoota durtii kan qubeelee 'jalqaba' fi 'dhuma' qindeessa. Gongee dhaamsaa kan yerooDhangii -Asian Typography filattu banamu keessatti, akka tarreen qubeelee seeraa alaa isaan gara jalqaba yookiin dhuma sararaa keeyyataa irratti raawwatu ifteessuu dandeessa.
Jalqaba sararaarra miti:
Dhuma sararaarra miti:
Title is: Teessuma Asian